WAA MAXAY XAQIIQO (REALITY) ? MAQAAL | JAALENEWS
WAA MAXAY XAQIIQO (REALITY) ? MAQAAL
Published on December 24, 2018 by Ashuraym · No Comments
WAA MAXAY XAQIIQO (REALITY) ?
Ma jiraa miizaan sax ah oo barax la’ oo la saari Karo xaqiiqada (Reality) ? Ma se jiraa shay dadka dhan isku raaceen la islana goostay inuu yahay xaqiiqo biyo kama dhibcaan ah? Haduusan jirin shay la isku raacay dhab ahaanshahiisa, ma waxeey tusineeysaa Ineeysan wax xaqiiqo ama dhab ahaansho jirin?.
Waxaan aqrinayay kitaab uu qoray Imam Abu Xaamid Al-Qazaali oo uu magac uga dhigay تهافت الفلاسفة. Kitaabkan, wuxu Ku raddinayaa falasuufyada ku andacooda iney caqligooda Ku gaareen xaqiiqada Iyo dhab ahaanshaha waxa qarsoon ee kownka Iyo kuwa kaashada caqliga kaliya, Isla markaana inkira wax kasta oo uu gaari waayo. Hadaba, Inta aanan guda galin moowduuca, waxaa muhiim ah inaan xusso maaddo udub dhaxaad u ah doodaha ugu badan ee ay galaan falasuufyadu.
Waa qeyb kamid ah falsafada, waxey ka hadashaa waxa ka dambeya dabeecada (beyond nature ) ama afka carabiga Lagu yiraahdo ( ما وراء الطبيعة) oo ah kownka jiritaankiisa, cidda sameeysay, inta uu jiray, inta uu jiri karo, ahaanshaha Iyo dhab ahaantiisa. Waa waxyaabaha gundhiga u ah maadadaan metaphysics ka Iyo qeybaha ka farcamo ee ah cosmology Iyo ontology oo kownka Iyo Iyo jiritaankiisa ka hadla. Filasuufyadu, cilmigoodu wa mid uu hago caqliga Iyo garashada, su’aal ba su’aal ayeey udhiibtaa ilaa uu marka dambe wareero.
Feylasuufkii gariigga (yuunaanka) wa Kan yiri “markaan wax ogaaday ayaan ogaaday inaan waxba ogaan” haka reebin oo Fakhru-Raazi isna Kuma qaldaneyn markuu yiri
“Wax aan aheyn in aan aruurinno wa la yiri Iyo weey yiraahdeen kama faa’iidin baaritaankannagii intii aan nooleyn”
Hadaba, su’aal isweeydiinta, baaritaanka Iyo shakiga waxey gundhig uyihiin garashada xaqiiqada. Waxaa kaloo hubaal ah inaan marnaba caqliga Iyo dareemayaasha shanta ah kaliya lagu gaari Karin xaqiiqada kownka Iyo garashada waxa ka dambeeya. Dareemayaasha Shanta ah waxaa ugu awood badan aragga, isna waxaa beeniyya inta badan caqliga. Bal waxaad fiirisaa harka (hooska) araggaagu wuxuu ku tusinayaa inuusan harku wax dhaqaaq ah laheyn oo uu taagan yahay, balse hadaad isku daydo inaad saacad kadib eegto, adoo tijaabinaya, waxaad ogaaneysaa inuu harku ama hoosku meeshisii hore ka dhaqaaqay, oo uu markiisii horaba ahaa (harka) mid si tartiib tartiib ah usocda, uusan marnaba aheyn mid taagan.
Sidoo kale, hadaad eegto meerayaasha (Planets) waxey kuula muuqanayaan inay yihiin kuwo xajmigoodu ama dhumucoodu yaryahay sida Shilin oo kale, balse markiiba caqligaaga ayaa beeninayya oo waxaad ogaaneeysaa inuu meeraha Jupiter ( cirjeex) kaliya ka weeynyahay meeraha dhulka, sida cilmiga casriga lagu ogaaday. Kaa Iyo tusaalayaasha la midka ahi waxaad ku cabirtay oo aad ku xukuntay dereemahaaga aragga, balse, durba waxa beeniyay suldaanka caqliga oo jaangooyay xaqiiqada dhabta ah ee ka duwan waxa araggaaga u muuqday.
Mar haduu caqligii xukumay oo uu jaangooyay garashada dhabta ah, buriyayna kalsoonida aad Ku qabtay dareemayaashaada, soo suurta gal maaha inuu jiro wax ka sarreeya garashada caqliga oo haduu soo daahiro beenin Kara garashada caqliga Iyo jaangooyntiisaba, sida uu caqligaba ubeeniyay garashada dareemayaasha ? Maqnaashaha arrintaasi se, ma waxey tusineeysaa suurtagalnimo la’aanteeda?
Mararka qaarkood adoo hurda soo ma rumeeysatid waxyaabaha qaar adoo malo- awaalayya xaalado, Isla markaana aaminayya sugaanshaheeda, oo marnaba aadan ka shakisaneeyn xaaladaas intaad ku dhex jirto hurdada. Kadib markaad soo toosto waxaad ogaaneeysa ineeysan wax sal Iyo baar toona laheeyn malo-awaalkaagii Iyo wixi aad aamintay intaad huruday.
Horta anaga ma jirnaa mise waan riyooeynaa? Maahan su’aal ubaahan in la dhayalsado. Sideed ugu kalsoonaan kartaa dhab ahaanshaha wax kasta oo aad ku ogaatay dareemayaashaada ama caqligaaga xilliga soo jeedkaaga marka loo fiiriyo xilliga aad huruday?
Soo ma kugu iman Karto xaalad aad dhab ahaanshaheeda kaga kalsoonaan karto soo jeedkaaga, oo ey Kula noqoto inaad riyo Ku jirto. Hadeey kusoo waajahdo xaalada aan aheeyn midda riyada Iyo soo jeedka, waxaad yaqiin san doontaa Ineeysan dhab aheeyn wax kasta oo ahaa Malo la humaag abuuray… caqligana kuu suureeyah. Waxey ubadantahay iney tahay xaaladaas aan tilmaamnay geerida, oo nabiga scw wuxu yiri: “الناس نيام فإذا ماتو انتبهوا” ” dadku waa kuwa hurda, markeey dhintaan beey baraarugaan” Soo ma oran karno, nolosha aduunku wa sida hurdo marka loo fiiriyo midda aakhiro, oo qofka markuu dhinto waxey ugu muuqanayaan wax walbo si ka duwan sida hada inta uu joogo aduunka, oo xilliga geerida waxa Lagu oran: “فكشفنا عنك غطاءك فلصرك اليوم حديد”
“Waxaana kaafaydnay daboolkii araggaaguna maanta waa xoog badanyahay”.
Hadaba dhimashada ka hor soo lama gaari Karo xaqiiqada ama cilmiga yaqiinta? Sidee se, qalbigaaga daboolka saaran looga feeydaa si aad ugaarto xaqiiqada waxa qarsoon ? Qoraalka oo dheeraaday aawadeed, dib ayaan wax uga qori doonaa weeydiimahaas jawaabahooda.